दुबईमा माउसबाट मेट्रो रेल चलाउँछन् मनिष राई - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider खाडी बिशेष दुबईमा माउसबाट मेट्रो रेल चलाउँछन् मनिष राई
‘आज मेरा बाआमा सबै खुशी छन् ।’ उनी मुस्कुराए, ‘कुनै समय हाम्रो परिवार संग खासै केहि थिएन तर अहिले सबैथोक छ ।’ दुबईको रोड ट्रान्सपोर्ट अथुरिटी आरटीएद्वारा संचालित मेट्रोका डिपोट कन्ट्रोलर मनिष राई भन्छन् , ‘गाउँमा हुँदा कम्प्युटर देखेको पनि थिइन सहरमा आएपछि कहिलेकाहीं कम्प्युटरको गेममा यस्तो देख्थे र खेल्थे तर वास्तविक जीवनमा कम्प्युटरबाट दुबईमा मेट्रो रेल हाँक्न पाउदा सपना जस्तै लागेको छ ।’
बिज्ञान र प्रविधि भनेको यहि हो सायद । बिज्ञानको बिद्यार्थी मनिषलाई प्रबिधिप्रति विश्वास थियो तर वास्ताविक जीवनमा यी सब यति छिटो गर्छु भन्ने लागेको थिएन । नेपालको राजनीतिक परिवेश, बेरोजगारको कारण युवाहरुको हरिबिजोग, बन्द हड्ताल, अनि देशको यो नाजुक अबस्थाले नेपालबाट लखेटिएका मनिष एक चोटी त स्वदेश फर्किए । तर विदेशको सुविधा, विदेशको रमझम र त्यहाको सिस्टम भुल्न नसकेपछि उनी फेरि विदेश जाने सोचमा महानगरका सडकहरु भौतारिरहे । दैनिक पत्रिकाका प्रत्येक पन्नाहरु पल्टाउन थाले र सयौं मेन पावर धाउन थाले । यहि क्रममा यू ए इ स्थित रोड ट्रान्सपोर्ट अथुरिटी आर टी ए द्वारा संचालित दुवै मेट्रोको पत्रिकामा बिज्ञापन देखे । करिब पौने लाखको तलब सुबिधा देखेपछि उनी अन्तर्वार्ताको लागि तयारीमा जुटे ।दुबैको एक बर्षको बसाई, उनको त्यताको अनुभब र मिठो अंग्रेजी बोल्ने हुँदा पनि उनलाई यो कम्पनिमा जागिर हुनेमा पक्कापक्की थियो ।
भनौ उनको भाग्य नै यहिबाट सुरु भयो, थोरै कामदारको आबश्यकता तर थुप्रै नेपाली बेरोजगार यूवाहरु बीचको प्रतिस्पर्धामा उनी त्यस कामको लागि योग्य भए र कम्पनीको अफर लेटर उनको हातमा आइपुग्यो । एक साधारण नेपाली यूवाको लागि तत्कालीन समयमा पौने लाख बराबरको तलब, अनि त्यो पनि कस्टुमर सर्विस असिस्टेन्ट जुन बैदेशिक रोजगारीको लागि गतिलो जागिर हो ।
कस्टुमर सर्विस असिस्टेन्टबाट प्रमोसन भई सेर्को लिमिटेड दुबई मेट्रोको डिपोट कन्ट्रोलर हुने मौका पाउने एक मात्र नेपाली हुन् धरानका मनिष राई । उनको काम कम्प्युटरबाट दुबई मेट्रो संचालन गर्ने हो । हरेक दिन कम्युटरबाटै मेट्रो रेल गुडाउन सुरु गर्ने, प्रत्येक स्टपमा रोक्ने, यात्रु चढाउने, ढोका बन्द गर्ने ढोका खोल्ने र यात्रु ओराल्ने सबै कम्प्युटरको माउस बाट उनले संचालन गर्दछन् उनी । र अहिले पनि उनी दुवई सहरमा एक्लै यहि काममा रमाइरहेका छन् ।
दुवै मेट्रोको डिपोट कन्ट्रोलर मनिषसंग काम गर्ने प्राय सबै नागरिक यूरोप लगायत अन्य बिकसित देशका छन् । उनी भन्छन् ‘हामी नेपालीले पनि मेहनत गर्न सके र इमान्दार बन्न सके इमान्दारिता र मेहनतको यो खाडी मुलुकमा सम्मान हुँदो रहेछ ।’ के यो पेशामा मिलेको सफलाताले बाबा आमा खुशी हुनुहुन्छ त भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘पढाउने र पढाइ सकेपछि छोराले कमाओस भन्ने बुबा आमाको चाहाना हो तर मैले पढेर भन्दा पनि जिन्दगीमा परेर धरै सिकेको छु र अहिले यहि खाडी बसेर भने जति मनग्य कमाएको छु ।’ उनी खुशी भए, Yes My parent’s are happy !
अहिले पनि एसएलसीमा फस्ट डिभिजन आउने बित्तकै आफ्नो छोरा छोरिले साइन्स पढोस भन्ने चाहाना सबै बुबाआमाको हुन्छ । १० र १२ बर्ष पहिलेत झन् नहुने कुरै भएन, त्यस्तै चाहना थियो धरानका मनिष राइको बुबाआमाको । एसएलसी सक्ने बित्तिकै उच्च सिक्षा हाँसिल गर्ने ठुलो लक्ष्य बोकेर काठमाडौँ हानिए मनिष । आफ्नो बुबाआमाको सपना पुरा गर्न उनी काठमाडौँ आएको केहि दिनमै काठमाडौँको ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स क्याम्पसमा आइएससीमा भर्ना भए । आइएससी सक्ने बित्तिकै सोहि क्याम्पसमा भर्ना भए बिएसीमा । आफ्नो मेहनतको फल र बुबाआमाको लगानी खेर नगएपनि बिएसी सकेर उनी काठमाडौँको कल सेन्टरमा काम गर्न थाले ।
काठमाडौँको बसाइमा कल सेन्टरको काम र साइन्स जस्तो पढाइ एकै साथ् कुदाउन उनलाई हम्मे हम्मे नै भयो । काम गरे पढाइलाइ सहज तरिकाले अघि बढाउन अफ्ठेरो, काम नगरे फेरी काठमाडौँको खर्च धान्न धेरै गाह्रो । उनलाई त्यो समयमा बढो सकसनै पर्यो । जागिर छोडेर घरबाट पैसा मगाउन पनि उनलाई अफ्ठेरो भयो र एकाएक विदेश जाने निर्णयमा पुगे ।
पत्रिकामा निस्किने सामान्यतया खाडी मुलुकको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकेटको बिज्ञापन खोज्न थाले र अन्तत यू ए इ सहरको दुवइको एक कम्पनीमा खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाली उनी दुवै सहर हान्निए । उनको विदेश जाने सपना त पुरा भयो । तर उनको पढ्ने रहर भने अधुरै रह्यो । पढ्न पठाएको छोरा एकाएक विदेश हानिएपछि बुबाआमा पनि त्यति खुशी हुन सकेनन् । र विदेश गएको छोराले झन् पैसा नै कमाउन सकेन भने बुबाआमा कति दुखि होलान् ? यस्तै भयो राइको परिवारमा ।
तर मनिषले हरेश खाएनन् । उनी केही गर्न र जीवनमा केही बन्न चाहान्थे । यो देशले उनलाई काम दिएन । देशभित्रै बेरोजगार भएर भौतारिरहदाँ उनले फेरि विदेश जाने सोच बनाए । अनि उनले फेरि पत्रिकाका विज्ञापनहरु हेर्न थाले ।
त्यहि क्रममा यू ए इ स्थित रोड ट्रान्सपोर्ट अथुरिटी आर टी ए द्वारा संचालित दुवै मेट्रोको पत्रिकामा बिज्ञापन देखे । करिब पौने लाखको तलब सुबिधा देखेपछि उनी अन्तर्वार्ताको लागि तयारीमा जुटे ।
दुबैको एक बर्षको बसाई, उनको त्यताको अनुभब र मिठो अंग्रेजी बोल्ने हुँदा पनि उनलाई यो कम्पनिमा जागिर हुनेमा पक्कापक्की थियो ।
दुबई पुगेपछि उनको सपना मात्र पुरा भएन । नेपाली युवाको क्षमतालाई जगजाहेर गर्न पनि पाए ।
यूएईको दुवई शहर स्थित देहेरामा रहेको अल रिग्गा मेट्रो स्टेसनमै भेटेर टिभी जर्नलिस्ट यादब देबकोटाले राई संग कुराकानी गरेका थिए ।